Mogadishu Journal » Roberto Firmino oo weerar kulul ku qaaday Sergio Ramos
Difaaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ku eedeysan dhibaatooyin fara badan oo uu u geystay ciyaartoyda kooxda Liverpool kullankii Final-ka ee Champions League-ga is wajahaeen labada kooxood bishii lasoo dhaafay.
Kabtanka Los Blancos ayaa dhibaato iyo weerarro afka ah kala kulmay ka dib markii uu sabab u noqday dhaawicii weeraryahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah, kaasi oo kullanka laga saaray qaybtii hore.
Waxaana intaas sii dheer in ay soo if baxday in Loris Karius oo ciyaarta dhexdeeda ku xanuunsaday ka dib markii uu Ramos xusul kaga dhuftay madaxa taasoo keentay in goolhayaha reer Germany uu sameeyo laba qalad oo uu gool kaga dhashay.
Sergio Ramos oo is difaacaya ayaana sheegay in uusan dhaawicin Salah isla markaasna aysan colaad kala dhexeyn, sidoo kalena Karius uusan waxba u geysan, waxaana uu markaas ka dhawaajiyay in haddii uu Firmino hergab ku dhici lahaana la dhihi lahaa dhididka Sergio Ramos ayaa gaaray.
Roberto Firmino ayaa markiisa afka furtay isagoo yiri: “waxaan door bidi lahaa inaan aamuso”.
“waxaan u maleynaa inuu isaga aragtidaas leeyahay, maxaa yeelay waxa uu ku guuleystay tartanka balse aniga waxaan u arkaa doqon marka uu hadalkaas ku hadlo” ayuu yiri Firmino.